कसरी बिरालो मूत्रको गन्धलाई हटाउने? धेरै जना मालिकहरू छिट्टै वा पछि यो प्रश्न सोध्थे। अक्सर, बिल्लियों विशेष ट्रे को लागि तिनीहरूको आवश्यकता संग सामना गर्न वा केवल "ट्याग" तिनीहरूको क्षेत्रमा सामना गर्न इन्कार गर्दछ। जस्तो कि यो हुन सक्छ, यो गल्ती पछि धेरै कठोर र निरन्तर छ। यस लेखमा हामी कसरी बिरालो मूत्रको गन्ध हटाउनको बारेमा कुरा गर्नेछौं। विन्डोजमा प्यानल स्टोरमा तपाइँ यस समस्याको सामना गर्न विशेष उपकरणहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरू सुरक्षित रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। तर तपाईलाई खातामा राख्नु आवश्यक छ जसमा तिनीहरूले गन्ध (कपडा, कालीन, सतह कुनै पनि) हटाउँदछ, किनकि यी उपकरणहरू सजिलै गन्ध हटाउन सक्छन्, उदाहरणको लागि, फर्शबाट, तर त्यही समयमा कालीनलाई क्षति पुर्याउन सक्छ। हामी अनुचित माध्यमहरु को मदद संग छुटकारा को गंध देखि छुटकारा को अधिक सरल र पहुँच को बारे मा कुरा गर्नेछ।
कसरी बिरालो मूत्रको गन्धलाई हटाउने?
सिरका। यो पतला रूप मा र सफा एक मा प्रयोग गर्नुहोस्। अप्रिय गंधहरू हटाउन यो उत्कृष्ट उपाय हो । यदि तपाइँ यसको शुद्ध रूपमा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने, त्यसपछि यसको सतहले पानीको साथमा सफा गर्नुहोस्।
अज्ञात अल्कोहल, वोदका। यस तथ्यको अतिरिक्त यो उपायले तीव्र गंधको उन्मूलनसँग सामना गर्न सक्षम हुनेछ, उनीहरूले पनि यस ठाउँमा पुन: निर्माण गर्ने बिरालोलाई रोक्न मद्दत गर्नेछन्।
म्यागनीज। यो उपकरण गाढा रंगको कुनैपनि तहको लागि उपयुक्त छ। पोटेशियम अनुमतिपत्र को एक कमजोर समाधान बनाउन आवश्यक छ र कपडा संग "सुगंधित ठाँउ" पोंछ। कपडा र कालीनका लागि यसलाई प्रयोग गर्न सिफारिस गरिएको छैन, किनकि धुंधलाको खतरा हो।
क्लोरीन। यो सार्वभौमिक उपकरण मात्र प्रयोग गर्नुहोस् यदि तपाईंले पक्का गर्ने सतहलाई क्लियरिनसँग सम्पर्क फर्काउनु पर्छ भनेर निश्चित गर्नुहोस्।
सोडा। यो अर्को महान उपकरण हो। कसाइटु सोडाबाट हामी भ्रूण स्थानमा राख्यौं र हामी पर्खिन्छौं, जब यो सुत्नेछ। त्यसोभए, हामी यसलाई सुक्छौं।
घरेलू साबुन। यो कठिन सतहहरूको लागि दुवै प्रयोग गर्न सकिन्छ, र सामग्रीको लागि, कपडाहरू। साबुनको साथ बिरा मूत्रको गन्ध हटाउनु अत्यन्त प्रभावकारी छ, यसले अन्य चीजको सामना गर्न सक्छ।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बिल्ली मूत्रको गन्धको लागि अघिल्लो उपचार जस्तै, यो सामग्री र ऊतकका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एकाग्र एक अत्यन्त शक्तिशाली कम्पाउन्ड हो जसले लाक कोटिंगलाई क्षति पार्न सक्छ।
कालीनबाट बिल्ली मूत्रको गन्ध कसरी हटाउने?
यदि तपाईंको पाल्तुले कालीनमा मल लगाउँदछ भने, तपाइँ निम्न प्रक्रिया अनुसार दाग र दाईको गन्ध हटाउन सक्नुहुन्छ:
धेरै तहहरूमा शौचालय पेपर (वा पेपर टोलहरू) राख्नुहोस् एक दूषित क्षेत्र र माथिबाट माथिबाट एक भारी वस्तुमा राख्नुहोस् ताकि तरलले यसलाई अझ राम्रो बनाउँछ। यदि कालीन पहिले देखि सुकेको छ भने, यो छ, मूत्र सूखे भएको छ, त्यसपछि यो आवश्यक छ कि पानीको साथ ठाउँमा जग्गा पहिले, र त्यसपछि कागज संलग्न र माथिमाथि प्रेस राख्नु आवश्यक छ। प्रक्रिया नापिन सुत्ने सम्म दोहोर्याइनु पर्छ।
हामी सिरका वा हाइड्रोजन पेरोक्साइडको समाधानमा पहिल्यै लुगा लगाइदिन्छौं , एक भ्रूण क्षेत्रमा राख्न र फेरि प्रेस प्रयोग गर्दछौं। हामी धेरै घण्टा पर्खिरहेका छौं।
त्यस पछि, कालीनबाट दाग हटाउनको लागि, हामी कालीनहरू सफा गर्न विशेष उपकरण प्रयोग गर्छौँ।
खरीद गर्दा एक भिडीयो तोताको सेक्स कसरी फरक पार्छ
हेज ह्याड फिड गर्ने प्रश्न, आश्चर्यले मलाई पकड्यो
कठोरता के हो? यसलाई कसरी प्रकट भएको छ? कसरी छुटकारा प्राप्त गर्न?
जेल "piroxicam": प्रयोग र analogues लागि निर्देशन
अवधारणा र अपराध को वस्तु को मूल्य। अपराध साइटहरु वर्गीकरण
महिनावारी समयमा गंभीर दुखाइ
Meri Meyps Dodzh, उपन्यास "रजत स्केट्स": मुख्य वर्ण एक सारांश